Avereno ny fahamendrehana amin'ny fifidianana UNWTO: sonia ny fanangonan-tsonia WTN
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany an'ny governemanta sy ny sekolim-panjakana » Avereno ny fahamendrehana amin'ny fifidianana UNWTO: sonia ny fanangonan-tsonia WTN
Desambra 12, 2020
The Tambajotra fizahan-tany manerantany androany dia nandefa ny “WTN ho an'ny fahamendrehana amin'ny fifidianana UNWTO" hetsika.
Ny World Tourism Network dia mangataka amin'ireo mpikambana ao aminy sy ireo mpiantsehatra amin'ny indostrian'ny fizahan-tany hanohana ity fanangonan-tsonia manaraka ity:
Niresaka ny fanangonan-tsonia:
- Sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana Antonio Guterres
- Sekretera jeneralin'ny UNWTO Andriamatoa Zurab Pololikashvili
- Hon. Minisitra, mpikambana ao amin'ny World Tourism Organization
Voasonia ny fanangonan-tsonia:
- Dr. Taleb Rifai, Sekretera jeneraly teo aloha, UNWTO 2010-2017
- Francesco Frangialli, Sekretera jeneraly teo aloha, UNWTO 1998-2010
- Prof. Geoffrey Lipman, sekretera jeneralin'ny fanampiana teo aloha, UNWTO & filoha teo aloha WTTC
- Louis D'Amore, mpanorina sy filoha International Institute for Peace amin'ny alàlan'ny fizahan-tany
- Juergen Steinmetz, filohan'ny World Tourism Network
Ry sekretera jeneraly malala, Hon. minisitra,
Manoratra amin'ny anaran'ny World Tourism Network (WTN) izahay, fiaraha-mientana manerantany ho an'ny fikambanana sy olona misolo tena ireo mpandray anjara amin'ny Travel & fizahan-tany arivo + avy amin'ny firenena 120 mahery.
Androany, taorian'ny dinika manerantany momba ny zoom, dia nanapa-kevitra izahay fa handrisika anao amin'ny fomba feno fanajana, mba hihaino ny antso nataonao teo alohan'i Francesco Frangialli sy Dr. Taleb Rifai, ary koa ny sekretera jeneraly mpanampy, Profesora Geoffrey Lipman, ary Louis D'Amore, mpanorina. ary filohan'ny Ivon-toerana Iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany hanemorana ny fifidianana ho sekretera jeneraly.
Ny tolo-kevitra dia ny hisian'ny fifidianana hifanandrify amin'ny fivoriana nahemotra (19-23 Mey) an'ny FITUR any Madrid, ny FITUR no antony voalohany nanovana ny fivoriana hatramin'ny Janoary. Ankehitriny dia tsy mitranga intsony ny FITUR amin'ny Janoary.
Manohana mafy ny tolo-kevitry ny sekretera jeneraly teo aloha izahay hanemotra ny fivoriana amin'ny Mey na amin'ny daty sy toerana hanaovana ny Fihaonambe ao Maraoka amin'ny volana septambra 2021.
Ny anton'ity fangatahana nataonao teo alohanao ity dia ny fanekena fa ny fifidianana madio dia ahafahan'ny mpilatsaka hofidina hanana fotoana handaminana miaraka amin'ny mpampiasa, ny fianakaviany ary ny governemantany ary koa ho an'ireo Minisitra hiantohana ny fisian'izy ireo amin'ny fifidianana.
Tsy hanelingelina ny fifantohana amin'ny COVID sy ny krizy momba ny toetrandro izay ataon'ny tontolo manontolo laharam-pahamehana koa izao.
Ny fitazonana ny daty janoary artifisialy dia mety hanome endrika hafainganam-pandeha mety hampihena, raha tsy manafoana ny fifaninanana. Vao mainka, noho izany FITUR tenany - ny antony voalohany tamin'ny volana Janoary - dia nahemotra hatramin'ny Mey.
Azonay antoka fa tsy te-hampiseho fiheverana amin'ny fampiasana fombafomba tsy etika ianao, izay mety hanaratsy endrika ny fikambanana izay mpiambina ny fitsipi-pitondrantena momba ny fizahantany.
Nanaovanay kopia ity taratasy misokatra ity ho an'ny Minisitry ny fizahantany any amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO sy ho an'ireo mpikambana ao amin'ny Affiliate, ary koa ny sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana.
Manantena ny valiny manorina izahay.
eTN Reader: Raha manaiky ianao manao sonia ny fanangonan-tsonia (kitiho eto)
Taratasy misokatra ho an'ny Firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO avy amin'ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha avy amin'i Francesco Frangialli sy Dr.Taleb Rifai
Ny sekretera UNWTO teo aloha Francesco Frangialli
Manantena izahay fa hahatratra anao ara-pahasalamana ity hafatra ity mandritra ireo fotoam-pitsapana.
Manoratra aminao izahay anio, amin'ny fahafahantsika manao sekretera jeneraly roa an'ny UNWTO hajaina anay, izay nanompo nandritra ny 20 taona. Manahy izahay ny amin'ny fiantraikan'ny fielezan'ny Covid-19 iraisam-pirenena amin'ny fifidianana ho avy ny Sekretera jeneraly amin'ny 2022-2025.
Tamin'ny fivoriana farany natao tany Georgia, ny Conseil Executive dia nanaiky ny fandaharam-potoana henjana amin'ny fifidianana ho avy ny Sekretera jeneraly manaraka. Nifanarahana, nifototra tamin'ny tolo-kevitry ny Sekretariat, fa amin'ny 18 Janoary 2021 no hatao ny fifidianana fa tsy mandritra ny Mey izay toy izany hatrany taloha. Ny antony lehibe indrindra an'ity tolo-kevitra ity dia ny hoe hifanindry kokoa amin'ny FITUR any Madrid satria ny lalàna sy ny lalàna mifehy dia ny hanaovana fifidianana hatrany amin'ny foibe [. Raha te-ho ara-drariny amin'ny Sekretariat, dia fantatray fa ny fanirian'i Espana ihany koa ny handamina ny fivoriana hifanandrify amin'i FITUR.
Niova ny toerana nanapahana izany fanapahan-kevitra izany. Nanapa-kevitra ny hanemotra ny FITUR i Espana hatramin'ny 19-23 Mey 2021. Ity toe-javatra ity dia tokony hanondro anao rehetra handinika ny fahendrena amin'ity fanapahan-kevitra ity, indrindra amin'ny fiheverana fa ny minisitry ny fizahantany, toy ny tompon'andraikitra maro hafa manerantany, dia miaina ny fanamby lehibe indrindra natrehin'ity sehatra ity. Ny minisitra dia iharan'ny tsindry isan'andro avy amin'ireo mpandray anjara amin'ny daholobe sy tsy miankina hanokatra ny sisintaniny ary hamerina ny dia. Raha dinihina, noho izany, ny fahataitairana sy ny laharam-pahamehana ataon'ny Minisitra tsirairay avy, ary ho fiarovana ny filaminam-bahoaka, dia manao antso avo ho anao izahay.
Manoro hevitra mafy izahay ny amin'ny tokony hanemorana ny fifidianana ny sekretera jeneraly 2022-2025, hatao miaraka amin'ny General Assembly ao Maroc (septambra / oktobra).
Toy izao ny antony:
1. Ny UNWTO dia nitazona ny filankevitra voalohany amin'ny taona amin'ny lohataona, tamin'ny faran'ny volana aprily na mey. Ny anton'io fotoana io dia ny hanomezana ny sekretera sy ny filankevitra hanana fankatoavana ny tetibola tamin'ny taona lasa (2020 amin'ity tranga ity). Noraisina ara-potoana izao mba hahafahan'ny auditors hamita ny asany amin'ny voalohan'ny volana aprily, mba hananana an'io fanaraha-maso io alefa ara-potoana amin'ny fivoriambe izay atao amin'ny volana septambra na oktobra.
2. Ny fivoriana dia mitaky fivoriana manokana fa tsy fivoriana virtoaly. Ny lalàna sy lalàna mifehy ny fizotry ny fifidianana dia midika fa, indrindra ny fandinihana ny fitsipiky ny fifidianana miafina, dia ho sarotra be ny manatanteraka izany amin'ny fivoriana an-tserasera virtoaly. Raha te hanana masoivoho hisolo tena ny fireneny, izay tsy rariny indrindra ho an'ireo firenena tsy manana masoivoho any Madrid, dia hanimba ny tsy fivadihan'ny fifidianana izany.
3. Miaraka amin'ny toe-draharaha misy ankehitriny ny areti-mifindra manerantany, izao tontolo izao dia manemotra hetsika toy izany, ary azo antoka fa tsy milaza mialoha azy ireo.
Miahiahy izahay ary te hitazona ny maha-marina sy mahitsy ny fifidianana Sekretera Jeneraly. Noho ireo antony rehetra ireo dia samy manome sosokevitra tsara izahay mba handinihan'ny UNWTO ny fanapahan-kevitra noraisina tany Georgia.
Manoro hevitra anao izahay mba hamindra ny fivoriana manaraka an'ny Executive Council, izay misy ny fifidianana, hifanindry amin'ny General Assembly amin'ny volana septambra / oktobra 2021. ho solony, ny filankevitra dia afaka manaja ny fanirian'i Espana, ilay firenena foiben'ny foiben'ny UNWTO , ny mbola hisian'ny fifidianana hifanandrify amin'i FITUR amin'ny Mey 2021.
Mikasika ny filatsahan-kofidina, ny toerana misy ankehitriny dia ny tsirairay manery ny fanapahan-kevitry ny Filankevitra handefa ny fangatahany amin'ny fe-potoana fohy nifanarahana tany Georgia. Mino izahay fa, amin'ny fahamarinana amin'ny olon-kafa izay mety mbola maniry ny hametraka ny firotsahany hofidina dia tokony hafindra hatramin'ny martsa 2021 ny faran'ny andro fampiatoana ny fangatahana kandidà, farafaharatsiny. Izany no nitranga tamin'ny fifidianana rehetra teo aloha.
Mazava ho azy fa mandika ny Secretariat amin'ity fifandraisana ity izahay. Nampandrenesina tsy ara-potoana izahay momba ny fikirizan'ity Sekretera ity hitandrina ny fandaharam-potoanan'ny fivoriana araka ny nanapahana hevitra tany Georgia. Izany no antony itenenanay imasom-bahoaka sy mivantana.
Misaotra betsaka antsika rehetra noho ny fahatakaranareo tsara sy ny fiheverana ny fiadanam-po sy ny fahamendrehan'ny UNWTO. Manantena ny hahita anao any amin'ny FITUR any Madrid izahay amin'ny Mey, ary azo antoka fa ao amin'ny General Assembly any Morocco amin'ny volana septambra / oktobra 2021.
Tsindrio eto raha hanao sonia ny fanangonan-tsonia
Ny World Tourism Network dia feon'ny orinasam-pizahantany kely sy salantsalany manerantany. Amin'ny fampitambarana ny ezaka ataontsika, ny WTN dia mametraka lohalaharana ny filàna sy ny hetahetan'ny orinasa kely sy salantsalany ary ireo mpandray anjara aminy.
Fampahalalana bebe kokoa momba WTN: www.tv.travel
Drafitra hetsika natomboka mba hitehirizana ny zirafy ao Tanzania
Mpizahatany israeliana mandeha amin'ny tany voarara indray mandeha - an'arivony isan'andro.